« Zoma mahafinaritra » : hiara-hiaka-tsehatra i Rija R. sy i Jimmy Harison | NewsMada
« Zoma mahafinaritra » : hiara-hiaka-tsehatra i Rija R. sy i Jimmy Harison
Mihamaro hatrany ireo toeram-pilanonana isaky ny faran’ny herinandro, indrindra ny zoma alina, eto an-dRenivohitra. Tsy eto afovoan-tanàna ihany fa any amin’ny manodidina koa, izay manomboka mahasarika olona. Ny zoma izao, ohatra, hiara-hampifaly ny mpankafy mozika, etsy amin’ny Eepace Dream’s etsy Androndra, i Rija Ramanantoanina sy i Jimmy Harison.
Nosafidina manokana ireo mpanakanto roa ireo noho ny traikefa ananany eo amin’ny sehatry ny mozika sy ny gadona iangalian’izy ireo avy, raha ny nambaran’i Safidy Maurah, mpikarakara ny hetsika. Hanomboka amin’ny « cabaret » ny fotoana ka samy hitondra ny hira i Rija Ramanantoanina sy i Jimmy Harison.
Samy manana ny mampiavaka azy izy mirahalahy ireo kanefa, na izany aza, tsy azo ferana ny hisian’ny fampiaraham-peo, izay heverina fa hanafana kokoa ny fiarahan’ny mpankafy. Ankoatra izany, hisy ny fotoana ahafahan’ny mpifety miara-mihira sy maka sary amin’ireo mpanakanto roa ireo. Ankoatra ny mozika, horavahin’ny fanentanana hiarahana amin’ny mpampandihy ny lanonana.